mairie-antananarivo – Mpivarotra Soarano-Behoririka
auteur 6 febroary 2017 Commentaires fermés
Noraisin’ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy akaiky tao amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely ny Alatsinainy 06 Febroary 2017 tolakandro ireo mpivarotra amoron-dalana etsy Behoririka sy ny manodidina. Ny handaminana ireo mpivarotra ireo no votoatin’ny dinika.
Nalalaka ny fandraisam-pitenenana ho an’ireo mpiavarotra ; Ny Ben’ny Tanana kosa dia nihaino sady nanamafy fa tsy maintsy atao ny fanarenana, izay mahasoa no tanterahana hoy izy ao anatin’ny fanarahana ny fitsipika ifampifehezana. Nambarany koa fa Renivohitra Antananarivo ; Ilaina koa ny mivoatra sady ilaina ny fahasarotampiaro mba tsy ho very anjavony izay ezaka natao. Mba hahamora ny fandaminana dia ilaina ny fananganana Komity ahitana ny solontenan’ny mpivarotra izay hifandray amin’ny mpitantana ny Tananan’Antananarivo.
Nanaiky ny fandaminana ireo mpivarotra amorondalana etsy Behoririka ka tsy teny midina no atao fa teny ifanarahana. Ny ampitso ihany dia efa hijery ifotony ireo mpiaramiasa amin’ny Ben’ny Tanana miaraka amin’ireo Komitin’ny mpivarotra ka aorian’izany no hivoahan’ny fandaminana raikitra. Nanararaotra niarahaba ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana noho ny taona vaovao ireo mpivarotra amoron-dalana etsy Behoririka ka nanolotra fanomezana ho mariky ny fanajana Ray amand-Reny. Nofaranana tamin’ny vavaka nataon’ireo mpivarotra ho fisaorana ilay Nahary ny fotoana.
Fitsirihana sy fitsarana tetik’asa “fifaninanana tanana madio”- Boriboritany faha efatra
MEN – CUA
Sekreteram-panjakana Frantsay – AFD – UE – CUA – Fanjakana
Fako misavovona eo amin’ny dabam-pako « Ouest Mananjara »
Boriboritany Fahadimy : Fanadiovana Alarobia Amboniloha